Haintrano teny Anosibe Andrefana II: trano 50 mahery may, lasa lavenona ny fananana | NewsMada
Ny akanjo teny an-koditra sisa! Levon’ny afo tao anatin’ny ora vitsy ny fananan’ireo olona traboina vokatry fahamaizan’ireo trano 50 tafo mahery teny Anosibe Andrefana II, omaly maraina. Nijoalajoala tsy nisy toy izany ny afo…
Ranomaso, horakoraka, fifanjevoana…! Santionany amin’ny tranga nandritra ny firehetan’ireo trano teny Anosibe Andrefana II, omaly izany. Kila hotohoton’ny afo tsy nisy noraisina ny fananana rehetra an’ireo fianakaviana niharam-boina, lasa lavenona tao anatin’ny fotoana fohy. Raha ny fitantaran’ny renim-pianakaviana iray 10 mianaka isan’ireo niharam-boina, niainga avy ao amina trano hazo iray ny afo ary tsy fantatra mazava ny nampirehitra ilay trano. “Ny afo efa nijoalajoala narahina setroka no nahataitra anay. Ny zazakely aloha no nezahina navoaka haingana niampy ireo entana azo nobataina”, hoy izy. Misy amin’ireo trano nirehitra no fivarotana sady trano fonenana. Tapitra kilan’ny afo tsy nisy azo noraisina ny entana namidy tao am-pivarotana. Levon’ny afo hatramin’ny vola rehetra tao am-pivarotana, araka ny fanazavana hatrany. Fotoana fohy taorian’ny firehetana, tonga teny an-toerana ny kamiaobe miisa enina avy amin’ny mpamonjy voina. Nanao ny ho afany tamin’ny famonoana ny afo ka voafehy ihany izany tamin’ny 9 ora maraina.
May hatramin’ny biby fiompy: kisoa sy akoho amam-borona
Mitentina antapitrisany ny fahavoazana nahazo ireo olona traboina. May hatramin’ny biby fiompy toy ny kisoa amam-borona ho an’ny sasany. Rehefa misy trangan-javatra toy izao, tsy kely lalana ny ratsy fa misy hatrany ireo manararaotra mangalatra ireo entana kely sisa avotra. Lasan’ireo jiolahy indray ny entana kely navoaka tety ivelan’ny trano ka isan’ny nampitaraina ireo niharam-boina. Toeram-pivarotana saribao koa aza, levon’ny afo satria lasa lavenona koa ny saribao miisa 80 gony tao am-pivarotana. Isan’ny nalaky nampiitatra ny afo ny fitsokan’ny rivotra satria trano hazo ireo nirehitra ka nampiakatra ny afo. Ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fokontany kosa, nanolotra toerana hametrahana ireo niharam-boina. Toerana ahitana haintrano matetika ny eny Anosibe sy ny manodidina iny. Tampoka ny fiavian’ny loza ka tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra ny momba ny fananganana trano hialana amin’ny loza toy izao satria miainga amin’ny trano hazo hatrany no mitarika ny firehetana.